Tag: buisness | Martech Zone
Qodista Dahabka leh Webka 2.0
Sabtida, Juun 10, 2006 Sabtida, Juun 27, 2015 Douglas Karr
Waxaan la hadlayey saaxiibkeyga wanaagsan, Bob Flores, oo hoggaamiye ka ah warshadaha Telecom. Bob wuxuu wax ku baraa shirkadaha hogaaminta shirkadaha wuxuuna ku takhasusay dhisida waxtarka warshadaha Telecom. Bob ayaa i weydiiyay caawa waxa aan u maleynayo in fikradda weyn ee xigta ay tahay. Waa tan waxa fekerkaygu ahaa: Ma jiraan lacag badan oo lagu haysto internetka adigoo si fudud u dhisaya bog. Internetku wuxuu ku dhex milmayaa multimedia iyo